Blog Juan Herranz ›Mabhuku nemafirimu emunhu wese
juanherranz.com, best literary blog 2021
Hausi iwo mubvunzo wekuzvisimudzira wega, izvo zvakare. Asi ini handina kukwanisa kurega kuitumira. Yangu blog parizvino zviri pamutemo bhuku rakanakisa remabhuku 2021 zvinoenderana nemakwikwi e20blogs epepanhau remaminetsi makumi maviri. Sezvinoratidzwa nesangano pacharo, ndiyo inonyanya kukoshesa mibairo ye ...
Top 3 Romance Polanski Movies
Nyaya yeRoman Polanski yaizoruramisa pfungwa yekuti mapango anokwezva. Nekuti hunyanzvi hwemutungamiriri wemufirimu uyu hunogona kuenzaniswa nedivi rayo rakasviba, nerudzi irworwo rwekurasika rwakanamatira kune magumo aro uye rwunobva mukusiyana kwezviitiko zvinogoneka kana...
Mukumuka kwa Javier Castillo, munyori weValencian David Orange anonongedza kumutengesi mutsva wemhando yazvino yekufungira. Mune mamwe mazwi, iyo yekunakidzwa uko mutinhimira unokunda pamusoro pezvese uye kuverenga zvinokatyamadza kunosvika pakusadzoka kubva papeji 1 pachayo. Pamwe inyaya ye...
3 akanakisa mabhuku naElzabeth Strout
Mhosva yaElizabeth Strout inoita kunge iri padyo neiyo paradigm yekutengeserana yakawanikwa nekushanduka kwakakosha. Nyaya duku idzo vazhinji vedu takatanga nadzo, idzo nyaya dzakagadziridzwa kune imwe neimwe nguva yehudiki kana hudiki ... Neimwe nzira, kunakidzwa kwekunyora kweavo vakambotanga kunyora,...
Vepamusoro 3 Peter Weir Movies
Kune mbiri yemutungamiriri weAustralia Peter Weir tinowana mashoma emafirimu makuru ayo zvinosuruvarisa akasaswa nenzira inochengeta nguva. Kuregeredza zvikonzero nei Weir asina kutora mamwe mafambiro muzvigadzirwa neake chaiyo Oscar-kuhwina label pane akati wandei. Pamwe ndechimwe...
Mabhuku akanakisa aRafael Tarradas Bultó
Kusvika kwaRafael Tarradas mumabhuku inzira inonakidza yekupikisa kune iyo label, kana isiri kushorwa, yerondedzero yemasaga emhuri ane chekuita nemapeni echikadzi. Maonero anovhura kupfuura María Dueñas kana Anne Jacobs, kutaura vanyori vaviri vezviratidzo vakapinzwa mune izvi…
Iwo matatu akanakisa mafirimu aAlejandro Amenábar
Kuita kuti gwara uye scriptwriting yefirimu ienderane kwatova kunaka kukuru. Kuwedzera kuumbwa kwenziyo kwairi panguva dzakawanda kunenge kunyomba kuratidza kugona kwekugadzira. Ndosaka mafirimu aAlejandro Amenabar achitipa nyaya dzakasiyana-siyana mumhando dzadzo dzakasiyana dzengano. Kubva…
Pamusoro 3 Bernhard Schlink Mabhuku
Mune chero basa ripi zvaro kana kuzvipira, avo vanosvika vasingatarisirwi vanonyorwa sevanotungamira kana kupomerwa mhosva yekudarika. Zvinopupurirwa kuti zvinyorwa zvinogara zvichitambira nemaoko maviri nemaoko kune chero munhu ane chimwe chinhu chinonakidza kutaurira pazvinodaro nekuzvipira kunodiwa kwemunyori chero akanaka. ...
Peji1 Peji2 ... Peji320 Zvadaro →